မနကျရုံးရောကျလို့ အလုပျလုပျဖို့ ကှနျပြူတာဖှငျ့လိုကျတဲ့အခါ “FYI: Please confirm the date of meeting. Can you LMK it before EOD? ...” အစရှိတဲ့ အတိုကောကျစကားလုံးတှနေဲ့ရေးထားတဲ့ e-mail တှကေို ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးဆီကနေ ဒါမှမဟုတျ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေနေ ရဖူးပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယျနဲ့သိပျမရငျးနှီးတဲ့အတိုကောကျစကားလုံးတှကေို နားလညျအောငျပွနျလုပျရတာက တဈခါတလမှောစိတျရှုပျစရာကောငျးပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စီးပှားရေးတံခါးတှဖှေငျ့လိုကျတဲ့အခြိနျကစပွီး နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကုမ်ပဏီတှေ အမြားအပွားဝငျရောကျလာသလို ပွညျတှငျးနဲ့ပွညျပအခွစေိုကျကုမ်ပဏီအမြားစုမှာ နိုငျငံတကာကကြှမျးကငျြသူတှကေို ငှားရမျးခနျ့အပျလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ နိုငျငံတကာကုမ်ပဏီအမြားစုဟာ အင်ျဂလိပျစာကို နိုငျငံတကာဘုံဘာသာစကားအဖွဈ အသုံးပွုတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့အလုပျလိုအပျခကျြအရ နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ဆကျသှယျရတဲ့အခါမှာ အင်ျဂလိပျစကားကိုကောငျးကောငျးအသုံးပွုတတျဖို့ လိုပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးက နိုငျငံခွားသားဖွဈတယျဆိုလြှငျ သူနဲ့ပွောဆိုဆကျသှယျနိုငျဖို့အတှကျ ပိုပွီးတော့တောငျအင်ျဂလိပျစာကို အသုံးပွုရပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလိုဆကျသှယျရတဲ့အခါမှာ သူ့နဲ့ပွောဆိုနိုငျဖို့လညျးအရေးကွီးသလို သူပွောသမြှနဲ့ရေးသမြှအကွောငျးအရာတှကေိုလညျး နားလညျနိုငျဖို့လိုပါတယျ။
နောကျပွီး လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာသတငျးအခကျြအလကျတှကေို အခြိနျနဲ့တပွေးညီသိရှိစဖေို့ ကုမ်ပဏီအတှငျးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဆကျသှယျတဲ့အခါမှာလညျး အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာလငျြလငျြမွနျမွနျပေးပို့နိုငျတဲ့ အီးမေးလျနဲ့ စာတိုပေးပို့စနဈတှကေို ပိုပွီးအသုံးပွုလာကွပါတယျ။ တကယျလို့မွနျး ကိုယျ့ရဲ့နိုငျငံခွားသားအထကျလူကွီးက သူ့ရဲ့မကျဆချေ့တြှနေဲ့ အီးမေးတှထေဲမှာ အတိုကောကျစာလုံးတှကေိုထညျ့ပွီး သုံးလာခဲ့လြှငျ သူပွောခငျြတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို အပွညျ့အဝနားလညျဖို့ အဲဒီစကားလုံးတှကေိုနားလညျဖို့လိုပါတယျ။ မဟုတျလြှငျ တခြို့အရေးကွီးတဲ့အခကျြတှကေို ကနျြခဲ့နိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး အတိုကောကျစကားလုံးတှကေို အသုံးပွုတဲ့အခါမှာ လငျြမွနျတဲ့ဆကျသှယျရေးသားမှုတှကေို ဖွဈစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လုပျငနျးခှငျမှာ e-mail နဲ့ပဲဖွဈဖွဈ Instant messaging နဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ဆကျသှယျပေးပို့တဲ့အခါ အသုံးမြားလရှေိ့တဲ့အင်ျဂလိပျအတိုကောကျစကားလုံးတှကေို ဗဟုသုတရအောငျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
1. ASAP – as soon as possible (ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးဆီကနေ “Send me the report ASAP” ဆိုတဲ့ e-mail ကို ရတယျဆိုရငျတော့ သူကကိုယျ့ကို ကနျြတဲ့အလုပျတှအေကုနျပဈခထြားပွီးတော့ အဲဒီအစီရငျခံစာကို ပွီးအောငျလုပျတော့လို့ ပွောနတောပဲဖွဈပါတယျ။)
2. BTW – by the way (ဥပမာ - “I read that article BTW. Not so great.” တဈခါတလမှော back to work လို့လညျး ဆိုလိုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ btw ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယျလိုအသုံးပွုထားသလဲဆိုတာကို ဂရုစိုကျဖို့လိုပါတယျ။)
3. COB – close of business (လုပျငနျးတဈခုပွီးစီးဖို့အတှကျ သတျမှတျထားတဲ့နောကျဆုံးအခြိနျကို ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ - “This is justareminder that the survey is still open and will remain open until COB today”)
4. COD – cash on delivery (ပစ်စညျးရောကျမှငှခေရြေတဲ့ ငှပေေးခမြှေုအမြိုးအစားတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ - We don’t have to pay the printer now. It’s COD.”)
5. EOD – end of day (ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ အလုပျအခြိနျရဲ့နောကျဆုံးအခြိနျကိုပွောခငျြတာပါ။ တဈခါတလမှောလညျး နတေ့ဈနရေဲ့နောကျဆုံး သနျးခေါငျးယံအခြိနျကိုပွောခငျြတာပါ။ ကိုယျ့အလုပျရှငျက ဘယျလိုမြိုးသုံးနှုနျးထားသလဲဆိုတာကိုတော့ သိအောငျလုပျရပါ့မယျ။ ဥပမာ - “I’d like to submit it before EOD.”)
6. EOM – end of message (အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာ မလိုအပျဘဲနဲ့ e-mail ဖှငျ့ဖတျရတဲ့အခကျအခဲတှကေို မဖွဈစဖေို့ ဒီစကားလုံးကို e-mail ရဲ့အကွောငျးအရာမှာသုံးလရှေိ့ပါတယျ။ ဥပမာ - e-mail မှာဘာမှမရေးဘဲနဲ့ Subject မှာပဲ “Budget meeting 10/11/2019 at 11am (EOM)” ဆိုပွီးသုံးလို့ရပါတယျ။)
7. F2F – face to face (မကျြနှာခငျြးဆိုငျတှဆေုံ့ပွီး ပွောခငျြတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယျ။ ဥပမာ - "Let's meet and work it out F2F.")
8. FAQ – frequently asked question(s) (အကွောငျးအရာတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး အမေးမြားတဲ့မေးခှနျးတှကေို ဆိုလိုပါတယျ။ ဥပမာ - “What are the FAQs for our new product?”)
9. FYI – for your information (ဒီစကားလုံးကိုတော့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျမြှဝပေေးပို့လိုကျတဲ့ သတငျးအကွောငျးအရာကို သတိထားမိစခေငျြရငျ အဲဒီစကားလုံးကို သုံးနှုနျးပါတယျ။ ဥပမာ - “FYI, this is the update I got from the team.”)
10. F/U – follow up (ကိုယျ့ရဲ့ Client ဆီကို e-mail ပို့ပွီးပွောဆိုဆှေးနှေးထားတဲ့အကွောငျးအရာကို ဖုနျးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ လူကိုယျတိုငျပဲဖွဈဖွဈ ဆကျလကျဆောငျရှကျတာကိုပွောတာ ဖွဈပါတယျ။ နမူနာစာကွောငျးဆိုရငျ “You should f/u your e-mail over phone-call or in person.”)
11. FWD – forward (ကိုယျ့ရဲ့ အထကျလူကွီး ဒါမှမဟုတျ လုပျဖျောကိုငျဖကျက သူ့ရဲ့e-mail ကို နောကျတဈယောကျဆီ ပေးပို့ပေးစခေငျြတဲ့အခါမှာ “Can you FWD my e-mail to XXX as I forgot to loop him/her in the convo?” အဲဒီမှာ Convo ဆိုတာ Conversation ကိုပွောတာပါ။)
12. IOW – in other words (အကွောငျးအရာတဈခုကို အရှမှေ့ာပွောထားတာထကျ ပိုပွီးရှငျးလငျးအောငျပွောခငျြရငျ ဒီစာလုံးနဲ့စပွီးပွောပါတယျ။ ဥပမာ - “The mobile library services have been reorganized – IOW, they visit fewer places.”)
13. LMK – let me know (ကိုယျပေးပို့လိုကျတဲ့ e-mail နဲ့ပတျသကျပွီး နောကျဆကျတှဲမေးခှနျးတှမေေးလို့ရအောငျ ဖှငျ့ပေးတဲ့သဘောနဲ့ အသုံးပါတယျ။ ဥပမာ - “LMK, if you have any questions about this event.”)
14. N/A – not applicable (မေးထားတဲ့မေးခှနျးနဲ့ပတျသကျပွီး ကိုကျညီသငျ့တျောတဲ့အဖွမေရှိတဲ့အခါမှာ ဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယျ။ ဥပမာ - “Ifaquestion does not apply to you, please put N/A in the box.”)
15. N/B, NB, n/b – nota bene (လကျတငျဘာသာစကားကနေ ဆငျးသကျလာတာဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျလို “Note Well” ကို ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျပေးပို့လိုကျတဲ့အရေးကွီးအခကျြအလကျတှကေို စာဖတျသူသတိထားမိစဖေို့ အဲဒီအခကျြအလကျရဲ့အရှမှေ့ာရေးလရှေိ့ပါတယျ။ E.g. “NB Applications received after the closing date will not be accepted.”)
16. NLT – no later than (အကွောငျးအရာတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး ကိုယျလိုခငျြတဲ့အဖွေ ဒါမှမဟုတျ အစီရငျခံစာ ဒါမှမဟုတျ အတညျပွုခကျြတှကေို သတျမှတျထားတဲ့အခြိနျထကျ နောကျမကစြဘေဲလိုခငျြတယျဆိုရငျ “Please provide feedback NLT EOD Wednesday.”)
17. NRN – no reply necessary (တဈခါတလမှော မလိုအပျဘဲ reply လုပျတဲ့ e-mail လုပျတှကွေောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ Inbox ထဲမှာ e-mail တှအေမြားကွီးနဲ့မကျြစီရှုပျနတေတျပါတယျ။ တကယျလို့မွနျး ကိုယျပို့လိုကျတဲ့ e-mail ကို reply မလုပျလညျးရတယျဆိုရငျ ဒီစကားလုံးကိုသုံးနိုငျပါတယျ။)
18. RSVP - Répondez s’il vous plait (ပွငျသဈစကားလုံးတဈခု ဖွဈပွီး ယဘေုယပြွောရမယျဆိုရငျ please respond နဲ့အတူတူပဲဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ - “RSVP to me by April 20th.”)
19. TBD – to be determined (အကွောငျးအရာတဈခုဟာ ဆုံးဖွတျဖို့လိုသေးရငျ ဒီစကားလုံးကိုသုံးကွပါတယျ။ ဥပမာ - “No. of participant: TBD”)
20. OOO – out of office (အကွောငျးကိစ်စတဈခုခုကွောငျ့ အခြိနျပိုငျးပဲဖွဈစေ ရကျတျောတျောကွာဖွဈစေ ရုံးမှာမရှိတဲ့အကွောငျးကို ကိုယျ့ရဲ့မကျဆချေ့တြှမှောဖျောပွခငျြရငျ “I will be OOO until Tuesday.”)
21. WFH – work from home (တခြို့တခြို့သောလူတှဟော သူတို့ရဲ့အလုပျတှကေို ရုံးမှာမဟုတျဘဲ အိမျမှာနပွေီးပွီးအောငျလုပျနတေယျဆိုတာကို သူတို့ရဲ့အထကျလူကွီးနဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေိုပွောပွတဲ့အခါမှာ သုံးလရှေိ့ပွီး အဲဒါဟာ ရုံးမှာဘယျသူကတော့ရှိတယျ ဘယျသူကတော့မရှိဘူးဆိုတာကို သိစဖေို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈပါတယျ။)
22. YTD – year to date (ပွက်ခဒိနျနှဈပဲဖွဈဖွဈ ဘဏ်ဍာရေးနှဈပဲဖွဈဖွဈ နှဈတဈနှဈရဲ့ ကိုယျရောကျနတေဲ့လကျရှိအခြိနျကို ရညျညှနျးဖျောခငျြလြှငျ သုံးပါတယျ။ ဥပမာ - ကိုယျ့ရဲ့အစီရငျခံစာမှာ အသားတငျအမွတျငှပေမာဏကို ဖျောပွခငျြတဲ့အခါမှာ “We’ve made $800,000 in sales YTD.”)
23. LET - Leaving Early Today. (အလုပျစောစောဆငျးမယျ့အကွောငျး အကွောငျးကွားတာပါ။ အမြားအားဖွငျ့ Group Mail ဖွငျ့ အကွောငျးကွားလရှေိ့ပါတယျ။ (I will LET.)
24. PRB - Please Reply By (ဘယျနေ့၊ ဘယျအခြိနျမှာတော့ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အကွောငျးပွနျပေးပါဆိုပွီး တောငျးဆိုတာပဲဖွဈပါတယျ။ အခြိနျအထိခိုကျမခံသောတောငျးဆိုမှုမြားအတှကျနောကျကသြောတုံ့ပွနျမှုမြားကိုသတိပွု ရနျ လိုအပျပါတယျ။) (PRB not later than end of 2nd May 2020).
25. HTH - Hope That Helps (အကူအညီဖွဈမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။) (ကိုယျက တဈစုံတဈဦးကို information တဈခုခု၊ ဒါမှမဟုတျ လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့တဈခုခုကို မြှဝလေိုကျတဲ့အခါ ကိုယျပေးလိုကျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ အကူအညီဖွဈမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျဆိုပွီး အကွောငျးကွားတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုပါတယျ။) (I HTH, but please let me know if you need anything else or if you have any other question.)
အခုဖျောပွထားတဲ့အတိုကောကျစာလုံးတှကေ စီးပှားရေးလုပျငနျးသုံးအင်ျဂလိပျစာရေးသားနညျးမှာ အသုံးမြားလရှေိ့တာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အခွားအသုံးမြားတဲ့စကားလုံးတှလေညျး ကနျြပါသေးတယျ။ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံနဲ့ ကိုယျတိုငျလလေ့ာဆညျးပူးမှုတှကေနေ ဆကျလကျသိရှိအောငျလုပျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုစကားလုံးတှဟော ကိုယျ့ရဲ့ e-mail ကို ကဈြလဈသှားအောငျ ကူညီပေးနိုငျသလို အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာ အလုပျတှငျကယျြအောငျလညျး အထောကျအကူဖွဈနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး သူတို့ကိုအသုံးပွုတဲ့အခါမှာ အက်ခရာနဲ့ ပုဒျဖွတျပုဒျရပျသင်ျကတေတှကေို သတိထားရပွီးတော့ သုံးသငျ့တဲ့နရောလား မသုံးသငျ့တဲ့နရောလားဆိုတာကိုလညျး ခြိနျဆရပါလိမျ့မယျ။
E-mail ရေးသားရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ အတိုကောက်စာလုံးများ
မနက်ရုံးရောက်လို့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ “FYI: Please confirm the date of meeting. Can you LMK it before EOD? ...” အစရှိတဲ့ အတိုကောက်စကားလုံးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ e-mail တွေကို ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆီကနေ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကနေ ရဖူးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယ်နဲ့သိပ်မရင်းနှီးတဲ့အတိုကောက်စကားလုံးတွေကို နားလည်အောင်ပြန်လုပ်ရတာက တစ်ခါတလေမှာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးတံခါးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတွေ အများအပြားဝင်ရောက်လာသလို ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအများစုမှာ နိုင်ငံတကာကကျွမ်းကျင်သူတွေကို ငှားရမ်းခန့်အပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအများစုဟာ အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်ငံတကာဘုံဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လိုအပ်ချက်အရ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်တယ်ဆိုလျှင် သူနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ပိုပြီးတော့တောင်အင်္ဂလိပ်စာကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုဆက်သွယ်ရတဲ့အခါမှာ သူ့နဲ့ပြောဆိုနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးသလို သူပြောသမျှနဲ့ရေးသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုလည်း နားလည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်ပြီး လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့ ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်း အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာလျင်လျင်မြန်မြန်ပေးပို့နိုင်တဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ စာတိုပေးပို့စနစ်တွေကို ပိုပြီးအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ တကယ်လို့မြန်း ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံခြားသားအထက်လူကြီးက သူ့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေနဲ့ အီးမေးတွေထဲမှာ အတိုကောက်စာလုံးတွေကိုထည့်ပြီး သုံးလာခဲ့လျှင် သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ အဲဒီစကားလုံးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ မဟုတ်လျှင် တချို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အတိုကောက်စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ လျင်မြန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးသားမှုတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ e-mail နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Instant messaging နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ပေးပို့တဲ့အခါ အသုံးများလေ့ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်စကားလုံးတွေကို ဗဟုသုတရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ASAP – as soon as possible (ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆီကနေ “Send me the report ASAP” ဆိုတဲ့ e-mail ကို ရတယ်ဆိုရင်တော့ သူကကိုယ့်ကို ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်ပစ်ချထားပြီးတော့ အဲဒီအစီရင်ခံစာကို ပြီးအောင်လုပ်တော့လို့ ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။)
2. BTW – by the way (ဥပမာ - “I read that article BTW. Not so great.” တစ်ခါတလေမှာ back to work လို့လည်း ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် btw ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုထားသလဲဆိုတာကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။)
3. COB – close of business (လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးစီးဖို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - “This is justareminder that the survey is still open and will remain open until COB today”)
4. COD – cash on delivery (ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေရတဲ့ ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - We don’t have to pay the printer now. It’s COD.”)
5. EOD – end of day (ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အလုပ်အချိန်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုပြောချင်တာပါ။ တစ်ခါတလေမှာလည်း နေ့တစ်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံး သန်းခေါင်းယံအချိန်ကိုပြောချင်တာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ရှင်က ဘယ်လိုမျိုးသုံးနှုန်းထားသလဲဆိုတာကိုတော့ သိအောင်လုပ်ရပါ့မယ်။ ဥပမာ - “I’d like to submit it before EOD.”)
6. EOM – end of message (အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ e-mail ဖွင့်ဖတ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကို မဖြစ်စေဖို့ ဒီစကားလုံးကို e-mail ရဲ့အကြောင်းအရာမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - e-mail မှာဘာမှမရေးဘဲနဲ့ Subject မှာပဲ “Budget meeting 10/11/2019 at 11am (EOM)” ဆိုပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။)
7. F2F – face to face (မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီး ပြောချင်တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ - "Let's meet and work it out F2F.")
8. FAQ – frequently asked question(s) (အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေးများတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာ - “What are the FAQs for our new product?”)
9. FYI – for your information (ဒီစကားလုံးကိုတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်မျှဝေပေးပို့လိုက်တဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာကို သတိထားမိစေချင်ရင် အဲဒီစကားလုံးကို သုံးနှုန်းပါတယ်။ ဥပမာ - “FYI, this is the update I got from the team.”)
10. F/U – follow up (ကိုယ့်ရဲ့ Client ဆီကို e-mail ပို့ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကို ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာကိုပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာစာကြောင်းဆိုရင် “You should f/u your e-mail over phone-call or in person.”)
11. FWD – forward (ကိုယ့်ရဲ့ အထက်လူကြီး ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က သူ့ရဲ့e-mail ကို နောက်တစ်ယောက်ဆီ ပေးပို့ပေးစေချင်တဲ့အခါမှာ “Can you FWD my e-mail to XXX as I forgot to loop him/her in the convo?” အဲဒီမှာ Convo ဆိုတာ Conversation ကိုပြောတာပါ။)
12. IOW – in other words (အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အရှေ့မှာပြောထားတာထက် ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်ပြောချင်ရင် ဒီစာလုံးနဲ့စပြီးပြောပါတယ်။ ဥပမာ - “The mobile library services have been reorganized – IOW, they visit fewer places.”)
13. LMK – let me know (ကိုယ်ပေးပို့လိုက်တဲ့ e-mail နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းတွေမေးလို့ရအောင် ဖွင့်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ အသုံးပါတယ်။ ဥပမာ - “LMK, if you have any questions about this event.”)
14. N/A – not applicable (မေးထားတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုက်ညီသင့်တော်တဲ့အဖြေမရှိတဲ့အခါမှာ ဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်။ ဥပမာ - “Ifaquestion does not apply to you, please put N/A in the box.”)
15. N/B, NB, n/b – nota bene (လက်တင်ဘာသာစကားကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို “Note Well” ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပေးပို့လိုက်တဲ့အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို စာဖတ်သူသတိထားမိစေဖို့ အဲဒီအချက်အလက်ရဲ့အရှေ့မှာရေးလေ့ရှိပါတယ်။ E.g. “NB Applications received after the closing date will not be accepted.”)
16. NLT – no later than (အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့အဖြေ ဒါမှမဟုတ် အစီရင်ခံစာ ဒါမှမဟုတ် အတည်ပြုချက်တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက် နောက်မကျစေဘဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် “Please provide feedback NLT EOD Wednesday.”)
17. NRN – no reply necessary (တစ်ခါတလေမှာ မလိုအပ်ဘဲ reply လုပ်တဲ့ e-mail လုပ်တွေကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Inbox ထဲမှာ e-mail တွေအများကြီးနဲ့မျက်စီရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့မြန်း ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ e-mail ကို reply မလုပ်လည်းရတယ်ဆိုရင် ဒီစကားလုံးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။)
18. RSVP - Répondez s’il vous plait (ပြင်သစ်စကားလုံးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျပြောရမယ်ဆိုရင် please respond နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - “RSVP to me by April 20th.”)
19. TBD – to be determined (အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာ ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုသေးရင် ဒီစကားလုံးကိုသုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ - “No. of participant: TBD”)
20. OOO – out of office (အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် အချိန်ပိုင်းပဲဖြစ်စေ ရက်တော်တော်ကြာဖြစ်စေ ရုံးမှာမရှိတဲ့အကြောင်းကို ကိုယ့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေမှာဖော်ပြချင်ရင် “I will be OOO until Tuesday.”)
21. WFH – work from home (တချို့တချို့သောလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကို ရုံးမှာမဟုတ်ဘဲ အိမ်မှာနေပြီးပြီးအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိပြီး အဲဒါဟာ ရုံးမှာဘယ်သူကတော့ရှိတယ် ဘယ်သူကတော့မရှိဘူးဆိုတာကို သိစေဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။)
22. YTD – year to date (ပြက္ခဒိန်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့လက်ရှိအချိန်ကို ရည်ညွှန်းဖော်ချင်လျှင် သုံးပါတယ်။ ဥပမာ - ကိုယ့်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ အသားတင်အမြတ်ငွေပမာဏကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာ “We’ve made $800,000 in sales YTD.”)
23. LET - Leaving Early Today. (အလုပ်စောစောဆင်းမယ့်အကြောင်း အကြောင်းကြားတာပါ။ အများအားဖြင့် Group Mail ဖြင့် အကြောင်းကြားလေ့ရှိပါတယ်။ (I will LET.)
24. PRB - Please Reply By (ဘယ်နေ့၊ ဘယ်အချိန်မှာတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြောင်းပြန်ပေးပါဆိုပြီး တောင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အထိခိုက်မခံသောတောင်းဆိုမှုများအတွက်နောက်ကျသောတုံ့ပြန်မှုများကိုသတိပြု ရန် လိုအပ်ပါတယ်။) (PRB not later than end of 2nd May 2020).
25. HTH - Hope That Helps (အကူအညီဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။) (ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ဦးကို information တစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုခုကို မျှဝေလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေက အကူအညီဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။) (I HTH, but please let me know if you need anything else or if you have any other question.)
အခုဖော်ပြထားတဲ့အတိုကောက်စာလုံးတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာရေးသားနည်းမှာ အသုံးများလေ့ရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေလည်း ကျန်ပါသေးတယ်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆည်းပူးမှုတွေကနေ ဆက်လက်သိရှိအောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစကားလုံးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ e-mail ကို ကျစ်လစ်သွားအောင် ကူညီပေးနိုင်သလို အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ အလုပ်တွင်ကျယ်အောင်လည်း အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အက္ခရာနဲ့ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သင်္ကေတတွေကို သတိထားရပြီးတော့ သုံးသင့်တဲ့နေရာလား မသုံးသင့်တဲ့နေရာလားဆိုတာကိုလည်း ချိန်ဆရပါလိမ့်မယ်။